Flim2MM: The Accidental Spy (2001)
ဂျက်ကီးချန်းဇာတ်လမ်းတပုဒ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီး၊ သွက်သွက်လက်လက် အက်ရှင်ခန်းတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းမြှုပ်ကွက်လေးတွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့သူကတော့ လယ်ဝေးသားလေး Kyaw Myo Thu ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
"ဘက်" ဆိုတဲ့ သာမာန်အရောင်းဝန်ထမ်းတယောက်ဟာ ဟောင်ကောင်ကအရောင်းစာရေးလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရက် ကွန်ဖူးတတ်တဲ့ ဘက်မှာ ကုန်တိုက်တခုက ဘဏ်ဓါးပြတိုက်မှုကို အစီအစဉ်ပျက်အောင် မွှေနှောက်ခဲ့ပြီး သာမညသူရဲကောင်းလေးဖြစ်လာပါတယ်။
ဘက်ဟာ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ပြီး သူ့မိဘတွေကိုတွေ့ဖို့ အမြဲစဉ်းစားနေသူတယောက်ပါ။ တရက်မှာ သူ့အဖေလို့ထင်ရသူကိုတွေ့ဖို့ ကိုရီးယားကိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ သေအံ့ဆဲဆဲ သူ့အဖေဟာ သူ့ကို ထူးဆန်းတဲ့ သဲလွန်စတွေပေးပြီ်းသေဆုံးသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီသဲလွန်စတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ၊ သူ့အဖေက စပိုင်တယောက်လား၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုစပိုင်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားပေးပါဦး။
[FORMAT]:………………………….:[ 1280p HDRip x264 MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Action, Comedy, Crime
[FILE SIZE]:……………………….:[ 979 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 27mins
[Translate By]:……………………..:[ လယ်ဝေးသားလေး Kyaw Myo Thu
Posted by Y Junction at 4:49:00 AM
Labels: Action, China, Comedy, Crime
Pyae Sone February 1, 2017 at 10:45 AM
Pyae Sone February 1, 2017 at 10:46 AM
Pyae Sone February 20, 2017 at 6:09 AM
Lin Mgmg March 15, 2017 at 4:42 AM
jackie chan moviesတွေထပ်တင်ပေးပါအုန်း
Lin Mgmg March 15, 2017 at 4:43 AM
Unknown February 15, 2019 at 3:38 AM
link lay pyan cha pay pr lrr
The Romantic President (2002)
The Godfather I (1972)